Gore rino Karman Healthcare iri kupemberera makore ayo makumi maviri nemashanu!
Ngatitorei nekukurumidza tarisa pane zvakaitwa nekambani iyi:
Kutanga kusimbiswa muna 1994, Karman Healthcare chikamu che kufamba indasitiri ine anopfuura 200 marudzi akasiyana e mavhiripu. Ndivo vanotungamira mukugadzira munyika wiricheya innovation. Karman anopa mutsara uzere we mavhiripu, vanofamba, vanofambisa, simba mavhiripu, scooter, uye nezvimwe zvakawanda.
Kwemakore makumi maviri nemashanu vakazvipira kukutsvagira chigaro chakanakira a hwose yekushandisa mukunyaradza, kufamba, uye kukwikwidza sarudzo. Chirevo chaKarman ndechekuti "Kunaka kuburikidza kufamba. ” Chinangwa chavo ndechekuramba vachikunda pakuunza kugutsikana kune vatengi vedu kuburikidza neyakagadzirwa chigadzirwa yavo yakasimba, yakashongedzwa, uye inoshamisa akasununguka mavhiripu.
Karman Healthcare zvigadzirwa zvinopfuura kufamba zvishandiso, ivo vanoshandira musika wekuchengeta kwenguva refu neicho chose chigadzirwa chinopa chinosanganisira mibhedha, midziyo, kugeza, kufamba, kufema, dialysis zvigaro, varwere-kutarisirwa, chinja, uye senga Midziyo.
Iko kune mashanu epakati maitiro ayo Karman Healthcare inotsigira: Kwevatengi Kutarisa, Kubatana, Kuzvipira, Kugadzira, uye Kunaka.
Kwevatengi Kutarisisa: Vatengi vanouya kutanga! Ndokusaka Karman yakazvipira kusangana uye kupfuura zvinotarisirwa nevatengi zvese zvemukati nekunze kuvaka hukama hwakavakirwa pakuvimba.
Kubatira pamwe: Chikamu chakakosha chebhizinesi. Kuburikidza nekubatana pamwe nekutaurirana Karman anosimudzira timu inovaka uye inoshandira iyo inovavarira kuvandudza mhedzisiro.
Kuzvipira: Karman anotora mutoro uye muridzi. Pano, isu tinochengeta kune zvibvumirano uye tinomhan'ara chero kutendeuka nenzira inokodzera kuti tiwane dzinokurumidza mhinduro.
Innovation: Karman Healthcare inoenderera mberi kuvandudza muzvinhu zvese uye yakavhurika kune vese itsva mazano anogona kuvandudza bhizinesi uye hupenyu hwevatengi vavo.
Kunaka: Vanozvipira padanho repamusoro re unhu uye inoratidza mune zvese zvigadzirwa uye masevhisi.
Chikamu cheKarman chekushingairira kugona ndiyo nzira iyo ivo ipa ruzivo. Pa Karman Webhusaiti, isu ipa ruzivo kune vatengi uye zvese wiricheya vashandisi vanogona kunge vaine mibvunzo nezve mavhiripu uye kufamba. Karman Healthcare anonzwisisa kuti vazhinji vanoshandisa wiricheya uye vadiwa vavo vangave nemibvunzo uye kupa zviwanikwa kune dzinoverengeka misoro. Unogona kuwana ruzivo nezve kudzivirira kudonha kubva kudzidzira mu wiricheya.
Karman Healthcare inopawo vadzidzi vekoreji uye veyunivhesiti nedzidzo yekuvabatsira kuzadzisa zvinangwa zvavo zvekupedzisira muhupenyu. Iyi fundo yakavhurika kune vadzidzi vane hurema, vakapasa chikoro, uye kune avo vane hanya nekuziva kuremara muAmerica.
Kwemakore makumi maviri nemashanu, Karman Healthcare yakaenda pamusoro nekupfuura kune vatengi vavo uye icharamba ichidaro mune ramangwana. Anofara mhemberero Karman uye heino mamwe makore makumi maviri nemashanu ekugona mu kufamba newiricheya.